Arsenal Mise Real – Martin Odegaard Oo Shaaca Ka Qaaday Halka Uu Doonayo Inuu Ka Cayaaro Xilli-cayaareedka Dambe – Garsoore Sports
Arsenal Mise Real…
Kubbadsameeyaha xulka qaranka Norway oo amaah hal xilli-cayaareed ah ku qaatay waqooyiga London iyo kooxda Arsenal ayaa soo bandhigay qaab cayaareed fiican intii lagu gudajiray safarkiisa gaaban waxaana taasi ay dhalisay iskudeyga Arsenal ay ku dooneeyso inay si Rasmi ah ulasoo wareegto xiddigan oo adeegiisa ay sii helaan.
Balse Martin Odegaard ayaa xaqiijiyay inuu yahay ‘Ciyaaryahan Real Madrid ah’ uuna jeclaan lahaa Erling Haaland inuu la yimaado Madrid oo ay ka wada cayaaraan caasimada Spain.
Real Madrid marwalba waxay si cad u doonayeen inay ceshtaan ciyaaryahankan khadka dhexe laakiin ilaa iyo intii uu Zinedine Zidane joogay kooxda, Arsenal ayaa ku jirtay dedaal adag oo ku aadan saxiixiisa. Haatan oo uu baxay Zidane, isla markaana Carlo Ancelotti uu ka tagay Everton si uu ula wareego, waxay umuuqataa in Odegaard uu ugu dambeyn kooxdiisa ka heli doono soo dhoweyj fiican.
“Waxaan ahay ciyaaryahan Real Madrid ah,” ayuu 22-jirkaan u sheegay suxufiyiinta isagoo ku celceliyay inuusan dareemeyn raaxo in amaah lagu diro marwalba maadaama lagu qasbay inuu sidaas sameeyo muddadii yareyd ee uu Real u cayaarayay illaa iyo hadda.
Odegaard waxa uu rajeynayaa in xilli ciyaareedka soo socda kooxdiisa Real uu ka heli doono door muuqda isagoo raadinaya ‘isku dheelitirnaan iyo xasillooni iyo koox daqiiqado isaga siin karta’.
Markii wax laga waydiiyay warqada furan ee uu Zidane u diray jamaahiirta Real Madrid, isaga oo sheegay in uu dareemayo in ayna kooxdu mar dambe ku kalsooneeyn isaga sidaasna uu uga tagay shaqada, Odegaard ayaa yidhi “Waan arkay taas. Kuwani waa ra’yigiisa iyo ereyadiisa. Ma doonayo inaan ka faaloodo, maadaama ay yihiin khibradihiisii.”
Ugu dambeyn, waxaa wax laga weydiiyay saaxiibkiis xulka qaranka, Erling Haaland, iyo haddii uu jeclaan lahaa inuu Spain kula ciyaaro weeraryahanka lala xiriirinayo Real Madrid. Odegaard ayaa ku jawaabay, “Dabcan. Waan weydiiyaa taas waqti ka waqti, laakiin isagu faallooyin badan kama bixiyo mustaqbalkiisa. Ugu yaraan majiraan wax aan halkan idinkula wadaagi karo. ”
Suuqa: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-iibsiga Cayaartooyda( 2- Juun – 2021 )